अन्तर्राष्ट्रिय युद्धमा मारिएका अमेरिकी सैनिकलाई 'हरूवा' भनेकोमा आलोचित भए ट्रम्प
युद्धमा मारिएका अमेरिकी सैनिकलाई ‘हरूवा’ भनेकोमा आलोचित भए ट्रम्प
Nepal Online Patrika| Source: आफ्नो एक बयानका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रशस्तै आलोचना खेप्न थालेका छन्।
युद्धमा मारिएका अमेरिकी सैनिकहरूलाई ‘हरूवा’ र ‘बुद्धु’ भनेकोमा उनको आलोचना भएको हो।
ट्रम्पको यो बयान सबैभन्दा पहिला ‘द एट्लान्टिस’ पत्रिकामा छापिएको बिबिसीले जनाएको छ। त्यसपछि यसको अंशलाई एसोसिएटेड प्रेस(एपी) र फक्स न्यूजले प्रकाशित गरेको बिबिसीको समाचारमा उल्लेख छ।
यध्यपी ट्रम्प र उनका सहयोगीले यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
बयान सार्वजनिक भएपछि पूर्व अमेरिकी सैनिकहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आलोचना गरेका छन्।
यसबारेमा प्रगतिशील समूह वोटवेट्स एक भिडिओ पोस्ट गरेको छ। भिडिओमा युद्धमा मारिएका सैनिक परिवारका बालबालिकालाई देखाइएको छ।
भिडिओमा एक जनाले ‘तपाईंलाई थाहा छैन बलिदान के हो’ लेखेका छन्।
इराक र अफगानिस्तानमा सैन्य सेवा गरेका पल रेचफ नाम गरेका एक पूर्व अमेरिकी सैनिकले ट्वीट गर्दै ‘यसबाट वास्तवमा कसलाई आश्चर्य भएको छ’ भनेका छन्।
विश्लेषकहरूले ट्रम्पको यस बयानले उनको राष्ट्रपतिमा पुनः निर्वाचित हुने चाहानामा झट्का लाग्नसक्ने बताएका छन्।
‘द एटलान्टिसका अनुसार’ सन् २०१८ मा ‘हारेका मानिसले भरिएको स्थान’ भन्दै पेरिसमा रहेको अमेरिकी सैनिकहरूको स्मारक स्थलको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रद्ध गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
पत्रिकाले चार वटा श्रोतको हवाला दिदैं त्यतिबेला पानी परिरहेको र त्यसले ट्रम्पमा आफ्नो कपाल बिगर्ने डर रहेको र यु’द्धमा मा’रिएका सै’निकलाई सम्मान गर्नु उनका लागि महत्वपूर्ण नभएको लेखेको छ।
यही भ्रमणका बेलामा ट्रम्पले बेलेयूवुडमा मारिएका १८ सय अमेरिकी सैनिक बुद्धु भएको बताएका थिए।
यिनै सैनिकहरूका कारण पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मन सेना पेरिससम्म पुग्न असफल भएका थिए।
‘द एट्लान्टिसले’ आफ्नो रिपोर्टमा गोपनिय सूत्रको हवाला दिएको छ भने एपीले भने आफूले यसलाई स्वतन्त्ररूपमा पुष्टि गरेको जनाएको छ। यस्तै फक्स न्यूजका संवादाताले केही बयानहरूको पुष्टि गरेको बताएका छन्।
ह्वाइट हाउसले समाचारलाई ‘झूटो समाचार’ भनेर प्रतिवाद गरेको छ।
उसले खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर उड्न नसकेपछि कार्यक्रम रद्ध गर्नुपरेको बताएको छ। यसको पुष्टि ट्रम्पका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले हालै लेखेको किताबमा गरेका छन्। यध्यपी उनी ट्रम्पका प्रखर आलोचक हुन्।
ट्रम्पको भनाइको आलोचना गर्दै आसन्न राष्ट्रपति चुनावमा उनलाई सो पदमा चुनौती दिइरहेका जो बाइडनले ट्रम्प देशको नेतृत्व गर्न असक्षम रहेको बताएका छन्।
पत्रकारलाई गाली गर्दै ट्रम्पले भने : अमेरिकी सेनालाई ‘हरुवा र शोषक’ भनेको आरोप आधारहिन:
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक पत्रकारलाई ‘स्लाइम बल’ भएको बताएका छन्। ती पत्रकारले ट्रम्पले मृत अमेरिकी सैनिकहरूलाई ‘हरुवा र शोषक’ भनेको विषयलाई उद्धृत गरेका थिए।
एट्लान्टिक पत्रिकाका अनुसार ट्रम्पले सन् २०१८ मा पेरिसस्थित अमेरिकी कब्रिस्तानको भ्रमण रद्ध गर्दै भनेका थिए : ‘त्यो ठाउँ हरुवाहरूले भरिएको छ।‘
चार वटा स्रोतहरूले उनले वर्षालाई कारण देखाउँदै भ्रमण रद्ध गरेको बताएका थिए। भनेका थिए,’वर्षाले मेरो कपाल बिगार्छ। किन जानु? त्यसो त युद्धमा मारिएकाहरूको सम्मान गर्नु आवश्यक छैन।‘
सोही यात्राको क्रममा राष्ट्रपतिले बेल्लो वुडमा मा’रिएका १ हजार ८ सय अमेरिकी सेनालाई ‘शोषक’को संज्ञा दिएका थिए।
उक्त युद्धले पहिलो विश्वयुद्धको बेला पेरिसमा जर्मनको अग्रगमन रोक्न मद्दत गरेको थियो।
बीबीसीका अनुसार युद्ध सकिएको एक वर्ष पछि उनले त्यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका थिए।
ट्रम्पले ती पत्रकारले एट्लान्टिक पत्रिकामा लेखेको समाचारलाई सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनाव जित्न रसियासँग मिलेको आरोपजस्तै आधारहिन भएको बताए। तर, उनको भनाइहरूलाई एसोसिएटेड प्रेसले स्वतन्त्र रुपमा पुष्टि गरेको थियो।
नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको २ महिना अघि ट्रम्पको आलोचकहरू अगाडि आएका छन्। जसमध्ये दिग्गजहरू पनि छन्। यस क्रमलाई रोक्न र आफूविरुद्धको दुष्प्रचार भएको पुष्टि गर्नमा ट्रम्प व्यस्त छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वले झेल्नुपरेका जटिल चुनौतीहरुको सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । साथै उहाँले राष्ट्रसंघलाई सशक्त बनाउनु सबै सदस्य राष्ट्रहरुको सामूहिक दायित्व भएको समेत बताउनुभएको छ ।
ताजमहल आजबाट खुल्यो
कोरोनाभाइरस संक्रमणपछि बन्द रहेको भारतको ताजमहल सोमबारदेखि खुलेको छ । गत मार्च १७ देखि बन्द रहेको आगरास्थित ताजमहल सोबारबाट खुलेको हो ।
कान्तिपुरले किन जोगायो बैँकहरुलाई “फिनसेन फाइल्समा” ?
Nepal Online Patrika - September 21, 2020 0
अमेरिकाको बजफिड न्युजले एक वर्षभन्दा अगाडि ठूलो संख्यामा गोप्य सरकारी कागजातहरुमा पहुँच पायो। खासमा सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचन र अन्य विषयहरुमा छानबिन गरिरहेका निकायहरुले जम्मा पारेको यो कागजातमा २१ सयभन्दा बढी शंकास्पद गतिविधिहरुको रिपोर्ट रहेछ।
विदेशबाट सोझै आफन्तलाई पैसा पठाउन सकिने, रेमिट्यान्समा झनै सहज
Kabita - September 21, 2020 0
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट सोझै आफन्तलाई पैसा पठाउन मिल्ने गरी रेमिट्यान्ससम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरेको छ ।
खुट्टा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ?यी उपाय अपनाउनुहोस् ठिक पार्न
गर्मी सकिएर विस्तारै चिसो मौसम शुरु हुँदैछ । चिसो समयमा खुट्टा फुट्ने तथा सुन्निने समस्याले अधिक सताउने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ।
मंगलबार बिहानै गर्नुहोस् पुजा भगवान गणेशजीको ,मिल्ने छ खुशी
कुनै पुजा आजा गर्दा हामिले भगवन गणेशजीलाई सम्जने गरिन्छ मंगलबारको दिन भगवान गणेशजीको पूजा गर्दा मिल्ने छ । लाभै लाभ हरेक मानिसहरुले मंगलबार भगवान गणेशको पूजा गरेकै हुन्छन् । धर्म शास्त्रका अनुसार मंगलबारको दिन निम्न काम बर्जित गरिएको छ ।